HOY i Anna: * “Misy fotoana aho kivy be dia tsy te hanao n’inona n’inona, na dia ny zavatra tiako aza. Te hatory foana aho. Matetika aho no mieritreritra hoe tsisy mpitia sady tsisy vidiny, ary enta-mavesatra ho an’ny hafa.”
Hoy i Mitia: “Nieritreritra ny hamono tena aho. Tsy tena te ho faty anefa aho, fa tsy te ho kivy be intsony fotsiny. Tia manampy olona aho, nefa lasa tsy te hiraharaha an’iza n’iza sady tsy te hanao n’inona n’inona rehefa kivy be.”
Nanomboka tamin’izy ireo 13 taona teo ho eo i Anna sy Mitia no kivy be. Marina fa mety ho kivy ny tanora indraindray, nefa ny azy roa vavy naharitra herinandro vitsivitsy na amam-bolana mihitsy, ary efa lasa aretina. Hoy i Anna: “Toy ny hoe tafahitsoka ao anaty lavaka maizim-be ianao. Hoatran’ny mitady ho lasa adala izany ianao, fa tsy hoatran’ny isan’andro.”
Tsy i Anna sy Mitia ihany no tratran’izany. Toa mihamaro foana izao ny tanora kivy be. Milaza ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) fa io olana io no “tena mahatonga ny ankizilahy sy ankizivavy 10 ka hatramin’ny 19 taona harary sy ho sembana ara-batana na ara-tsaina.”
Izao no ahitana fa kivy be ny tanora iray: Tsy mahita tory izy na be torimaso loatra, malain-komana na mazoto homana be, ary mahia kely na matavy be. Mety halahelohelo izy, hahatsiaro ho tsy misy vidiny, na hieritreritra hoe tsy hisy mangirana mihitsy ny fiainany. Mety hitokantokana koa izy, te hamono tena, tsy hifantoka na ho very tadidy, ary hahitana soritr’aretina tsy hay hazavaina. Ahoana no ahalalan’ny mpitsabo raha efa lasa aretina ny hakivian’ny tanora iray? Matetika no jereny hoe inona amin’ireo famantarana ireo no efa mitranga mandritra ny herinandro maromaro, ka mahatonga an’ilay tanora tsy hahavita ny zavatra fanaony.
INONA NO METY HAHATONGA NY TANORA HO KIVY BE?
Milaza ny OMS fa ‘maro ny antony mahatonga izany. Tsy zakan’ilay tanora angamba ny fomba itondran’ny hafa azy, na miady saina izy, na manana olana ara-batana.’
Olana ara-batana. Toa an’i Mitia, dia matetika no lasa kivy be ny tanora iray raha efa nisy tratran’izany ny fianakaviany. Mety hanaranaka àry io aretina io. Misy vokany eo amin’ny fomba fiasan’ny atidoha angamba ny fototarazo. Anisan’ny mahatonga ny tanora ho kivy be koa ny aretim-po sy ny fiovan’ny fatran’ny hormonina, ary ny zava-mahadomelina sy ny toaka. Mety ho vao mainka kivy be izy raha mpidoroka. *
Adin-tsaina. Tsy mampaninona ny hoe miady saina kely. Mankarary anefa izany raha be loatra. Mbola miovaova ny hormonina ao amin’ny tanora, ka mety ho mora kivy be izy ireo raha miady saina lava. Tsy tena fantatra anefa hoe nahoana no misy tanora kivy be. Mety ho antony maromaro mitambatra no mahatonga izany, araka ny hita terỳ aloha.
Ireto no anisan’ny mampiady saina ny tanora ka mahatonga azy ho kivy be: Nisaraka ny ray aman-dreniny, nisy havany maty, nisy namono izy na nametaveta, tratran’ny loza, na marary. Ho kivy be koa izy raha mahatsiaro hoe ailikiliky ny hafa satria votsa saina. Ankoatra izay dia mety hanantena azy hahavita zavatra tsara be ny ray aman-dreniny, ohatra hoe eo amin’ny resaka fianarana. Ampijalin’ny ankizy koa angamba izy, manahy momba ny hoavy, kivy be ny rainy na ny reniny ka tsy miraharaha azy, na miovaova be ny fomba itondran’ny ray aman-dreniny azy. Inona àry no mety hanampy ny tanora raha lasa kivy be izy?
MIEZAHA HANANA VATANA SY SAINA SALAMA
Matetika no mahasoa an’ireo tanora lasa kivy be ny mihinana fanafody sy manatona mpitsabo aretin-tsaina. * Hoy i Jesosy Kristy: “Tsy ny matanjaka no mila dokotera, fa ny marary.” (Marka 2:17) Mety hisy vokany amin’ny vatantsika sy ny saintsika tokoa ny aretina. Ilaina koa angamba ny manova ny fomba fiainantsika satria mifampiankina ny vatana sy ny saina.
Raha kivy be ianao, dia miezaha hanana vatana sy saina salama. Ataovy tanjona, ohatra, ny hihinana sakafo mahasalama, ho ampy torimaso, ary hanao fanatanjahan-tena tsy tapaka. Misy zavatra simika mivoaka ao amin’ny atidohanao rehefa manao fanatanjahan-tena ianao. Hanampy anao ho falifaly sy hatanjaka ary hatory tsara izy io. Raha mety, dia fantaro ny antony mahatonga anao ho kivy be. Jereo koa izay famantarana hoe mitady ho kivy be ianao ary mamoròna tetikady. Miresaha amin’ny olona atokisanao ary miaraha amin’ny havana sy namana vonon-kanampy. Mety tsy dia ho kivy be ianao amin’izay. Soraty ao anaty diary ny eritreritrao sy ny fihetseham-ponao. Izany no nanampy an’i Mitia, ilay voaresaka tany aloha. Aza hadinoina koa ny mifandray amin’Andriamanitra, satria hanampy anao hanana fomba fijery tsara momba ny fiainana izany. Hoy i Jesosy: “Sambatra ny mahatsapa fa mila an’Andriamanitra.”—Matio 5:3.
Mihinàna sakafo mahasalama, manaova fanatanjahan-tena, ary miezaha ho ampy torimaso
Miezaha hifandray amin’Andriamanitra fa hampahery anao izany
Samy nahita i Anna sy Mitia hoe marina ny tenin’i Jesosy. Manao zavatra manampy azy hifandray amin’Andriamanitra i Anna. Hoy izy: “Lasa mifantoka amin’izay hahasoa ny hafa aho, fa tsy amin’ny olana mahazo ahy. Tsy mora foana ilay izy nefa lasa faly kokoa aho.” Mampahery an’i Mitia ny mivavaka sy mamaky Baiboly. Hoy izy: “Lasa tony aho rehefa mamboraka ny ao am-poko amin’Andriamanitra. Rehefa mamaky Baiboly aho, dia tsapako hoe mikarakara ahy Andriamanitra sady sarobidy aminy aho. Manantena hoavy tsara koa aho.”
I Jehovah no Mpamorona ka takany tsara hoe misy vokany eo amin’ny fomba fijerin’ny olona sy ny fihetseham-pony ny fomba itaizana azy sy ny zavatra niainany ary ny fototarazony. Afaka manampy sy mampahery antsika àry izy, ka mety hampiasa olona tsara fanahy sy mahatakatra tsara ny mahazo antsika. Mbola hositraniny koa ny aretina rehetra, na ara-batana na ara-tsaina. Hoy ny Isaia 33:24: “Tsy hisy mponina hilaza hoe: ‘Marary aho.’”
Mampanantena ny Baiboly fa hofafan’Andriamanitra ‘ny ranomaso rehetra amin’ny masontsika, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana.’ (Apokalypsy 21:4) Mampahery tokoa izany! Raha te hahalala ny fikasan’Andriamanitra momba ny tany sy ny olombelona àry ianao, dia midira ao amin’ny tranonkala jw.org/mg. Hahita Baiboly marina tsara ianao ao ary koa lahatsoratra samihafa, anisan’izany ny momba ny hakiviana.
^ feh. 10 Karazana aretina sy fanafody ary rongony an-jatony no mety hisy vokany amin’ny fihetseham-po, ka ilana fitsaboana.
^ feh. 14 Tsy mampirisika ny olona hanaraka fitsaboana manokana ny Mifohaza!
Izay Azon’​ny Ray Aman-dreny Atao
Fantaro fa mety ho mafy amin’​ny tanora kivy be ny milaza an’​izay tsapany, na mety tsy ho takany ny mahazo azy. Mety tsy ho fantany akory aza ny famantarana an’​ilay aretina.
Tsy mitovy ny tanora sy ny olon-dehibe rehefa kivy be. Aoka àry ianao ho mailo raha miova be ny fihetsiny, ny fahazarany misakafo, ny fihetseham-pony, ny fifandraisany amin’​ny hafa, na ny fotoana atoriany, indrindra raha efa mitranga mandritra ny herinandro maromaro ilay izy.
Tonga dia manaova zavatra raha hita amin’​ny teniny na ny fihetsiny hoe te hamono tena izy.
Manatòna mpitsabo raha hitanao hoe maharitra be ilay hakiviana fa tsy zavatra mandalo fotsiny.
Ampio izy mba hanaraka tsara ny tenin’​ny dokotera. Miresaha amin’​ilay dokotera raha mbola tsy misy fiovana, na hitanao hoe misy vokany ratsy ilay fitsaboana.
Miezaha hiara-misakafo sy hiara-manao fanatanjahan-tena tsy tapaka. Aza ovaovana koa ny ora fatorianareo.
Miezaha hifampiresaka tsara amin’​ny zanakao, ary ampio izy mba tsy hiraharaha izay lazain’​ny olona momba azy noho izy kivy be.
Mahatsiaro ho manirery, menatra, na tsy misy vidiny ny tanora rehefa kivy be. Omeo toky foana àry izy hoe tia azy ianao.
Mitadiava Paikady Hanampy Anao
Raha kivy be ianao, dia fantaro hoe inona ny paikady hanampy anao ­hifehy ny eritreritrao sy ny fihetseham-ponao. Mety hanampy anao ireo zavatra tanisaina eto amin’​ity pejy ity, nefa azonao ampiana zavatra hafa koa.
Nomeraon’​ireo olona antsoina rehefa kivy ianao
Hira tianao sady mampifalifaly sy mampahery anao
Lahatsoratra mampahery sy teny filamatra mandrisika anao hanao zavatra
Lisitr’​ireo andinin-teny mampahery ao amin’​ny Baiboly, ohatra hoe Salamo 34:18; 51:17; 94:19; Filipianina 4:​6, 7
Zavatra ahatsiarovanao an’⁠ireo olona tia anao
Diary anoratanao hevitra mampahery sy izay zava-nitranga nahafinaritra anao
Mora Voa Kokoa ny Ankizivavy
Hoatran’​ny mora kivy be ny ankizivavy raha oharina amin’​ny ankizilahy. Mety hiady saina mantsy ny ankizivavy noho izy misy mampijaly, manambanimbany, manadala, na mametaveta. Hoy ny mpanolo-tsaina matihanina atao hoe Sharon Hersh: “Matetika no misy vokany ratsy eo amin’​ny ankizivavy ny zava-mitranga eo amin’​ny fiainany. Mampiady saina azy koa anefa ny zavatra tsapany, ohatra hoe ny fiheveran’​ny hafa azy.” Mety hisy vokany aminy koa izay asehon’​ny haino aman-jery momba ny atao hoe tsara bika. Mora kivy be ny ankizivavy raha mieritreritra ny tenany ho ratsy tarehy, na manahy loatra momba ny fahitan’​ny namany azy. *
^ feh. 44 Jereo ilay lahatsoratra hoe “Inona no Lazain’​ny Baiboly? Hatsaran-tarehy”, ao amin’​ny Mifohaza! No. 4 2016.